ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ဖြင့်ဖောက်သည်များ၏သစ္စာရှိမှုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နည်း။ Martech Zone
သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 19, 2018 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 20, 2018 နီနာ Ritz
သင်နားမလည်သောအရာများကိုသင်မသိမ်းဆည်းနိုင်ပါ။ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖောက်သည်ဝယ်ယူမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောအခါ, သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူပါတယ်။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကြောင့်သင်ဟာဝယ်ယူမှုနည်းဗျူဟာကိုတွက်ပြီးပြီ၊ သင်၏ထုတ်ကုန် / ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖောက်သည်များ၏ဘ ၀ နှင့်ကိုက်ညီအောင်လုပ်သည်။ သင်၏ထူးခြားသောတန်ဖိုးအဆိုပြုချက် (UVP) သည်အလုပ်လုပ်သည် - ၎င်းသည်ပြောင်းလဲခြင်းကိုသွေးဆောင်။ ၀ ယ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလမ်းညွှန်သည်။ ပြီးနောက်ဘာဖြစ်တာလဲသိလား အရောင်းအဝယ်ပြီးဆုံးသွားသောအခါအသုံးပြုသူသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသနည်း။
လိုင်းအသစ်များနှင့်ပရိသတ်အသစ်များကိုအစဉ်လိုက်ရှာဖွေခြင်းသည်ပျော်စရာကောင်းသော်လည်း၎င်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်မှာအလွန်ဈေးချိုသည်။ သို့သော်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည်သိမ်းဆည်းခြင်းကဲ့သို့တူညီသောယာဉ်မောင်းများပေါ်တွင်မှီခိုခြင်းမရှိပါ - ၎င်းတို့နောက်ကွယ်ရှိရည်မှန်းချက်များသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ၎င်းနှစ်ခုမှပေါ်ပေါက်လာသောအသုံးပြုသူ၏အပြုအမူနှင့်စိတ်ခံစားချက်များသည်ဖြည့်စွတ်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုသီးခြားစီကိုင်တွယ်ရမည်။ ဖောက်သည်၏သစ္စာရှိမှုကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းမှတည်ဆောက်သည်။ ဖောက်သည်ဝယ်ယူမှုမျှသာဖို့တံခါးဖြစ်ပါတယ်။
ဤနေရာတွင်အဓိကသော့ချက်မှာသင်၏ဖောက်သည်များသည်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြီးနောက်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမဟုတ်ဘဲသင်၏ကုန်ပစ္စည်း / ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်လက်ဆက်သွယ်ပြီးသူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုသင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဆက်နွှယ်နေသည်ကိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။
အရောင်းအဝယ်မတိုင်မှီနှင့်ကာလအတွင်းသင့်ပရိသတ်၏အပြုအမူကိုပုံဖော်ပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များကိုသင်၏ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဗျူဟာတွင်ထည့်သွင်းရန်အတွက်သင်သည်အချက်အလက်များစွာတွင်အလွှာတစ်ခုကိုလိုအပ်သည်။ ဘာတွေလဲ Key ကိုဒေတာမက်ထရစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်? သင်သည်သင်၏အကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်ပါသည်:
သုံးစွဲသူများသည်သင့်ကိုမည်သို့ရှာတွေ့သနည်း။ မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် / အမှတ်တံဆိပ်မဟုတ်သောရှာဖွေခြင်းသည်နောက်ဆုံးတွင်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ ၀ ယ်ခြင်းသို့ရောက်သနည်း။ ထိပ်တန်းစွမ်းဆောင်ရည်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများနှင့်အဘယ်မှာရှိသည့်ခဲ့သည်ရှိရာ နွေးထွေးမှု? သင်ရောင်းအားအများဆုံးပမာဏဖြစ်သောတိကျသောအသုံးပြုသူလူ ဦး ရေနှင့်ဆက်စပ်သည့်သီးခြားအကြောင်းအရာအပိုင်းအစကိုသင်ချည်နှောင်နိုင်ပါသလား။
သင့်တွင် Google Analytics ခြေရာခံခြင်းရှိပါက ဂူဂဲလ်ရှာဖွေရေး Console နှင့်ချိတ်ဆက်ထား, သင်သည်ဤမေးမြန်းချက်များကိုအတိတ်ကာလ ၁၆ လအထိရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီးထိပ်တန်းစွမ်းဆောင်ရည်များကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ သင်သည်ဤသော့ချက်စာလုံးများကိုတိကျသောဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုသူအားဝယ်ယူရေးလမ်းကြောင်း၏အကောင်းဆုံးအစမှတ်ဟုသတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေနိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်များကိုသင်၏အသုံးပြုသူလူ ဦး ရေစာရင်း၊ စက်အမျိုးအစား၊ အမူအကျင့်နှင့်အကျိုးစီးပွားများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိခြင်းဖြင့် ထပ်မံ၍ ပြိုကွဲသွားနိုင်သည်၊ ၎င်းတို့သည်ပြောင်းလဲနိုင်မည့်ပရိသတ်အမျိုးအစားများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။
မင်းရဲ့ရောင်းအားကဘယ်လိုလဲ။ သင်သတိပြုမိသောပျမ်းမျှအမှာစာတန်ဖိုးမှာအဘယ်နည်း။ သင်၏ထပ်မံဝယ်ယူမှုနှုန်း၏ပျမ်းမျှတန်ဖိုးကားအဘယ်နည်း။ သင်၏ထိပ်တန်းစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည့်ထုတ်ကုန် / ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အဘယ်နည်း။ အသုံးပြုသူလူ ဦး ရေနှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသလား။
အကယ်၍ သင့်တွင် Enhanced E-commerce ခြေရာခံခြင်းကို Google Analytics (သို့) တတိယပါတီဆော့ (ဖ်) ဝဲမှတစ်ဆင့်တပ်ဆင်ထားပါက၎င်းအရာအားလုံးကိုခြေရာခံနိုင်ပြီးတန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။ စိတ်ထဲ၌ထားရန်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသောအစိတ်အပိုင်း၏ပမာဏနှင့်အရောင်းမက်ထရစ်သည်အလွန်ကွဲပြားသည်။ ရာသီဥတုသို့မဟုတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရောင်းအဝယ်သည်တိုတောင်းသောအချိန်ကာလများကိုကြည့်သောအခါကွဲလွဲချက်များအဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏မျက်စိကိုဖွင့် ထား၍ အချက်အလက်များကို၎င်းကိုမတိုင်မီသို့မဟုတ်ယခင်နှစ်အလားတူကာလတစ်ခုအတွင်းတွင်ပင်သတ်မှတ်ထားသည်။
သင့်ဖောက်သည်များမည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုသင်သိပါသလား။ မင်းရဲ့အဓိကဝယ်ယူလိုင်းတွေကဘာတွေလဲ။ သူတို့သည်သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်တူညီသောလမ်းကြောင်းများလောသို့မဟုတ်ရောင်းအားအများဆုံးမောင်းနှင်သောလမ်းကြောင်းများလား။ ဝင်ငွေအများဆုံးမောင်းနှင်သည့်လမ်းကြောင်းများမှာအဘယ်နည်း။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်သင်၏အဓိကပြောင်းလဲခြင်းအမှတ်ဖြစ်ပြီးသင်၌ Google Analytics တည်ဆောက်မှုရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆလျှင်၊ အထက်ပါမေးခွန်းများကိုသင်အလွယ်တကူဖြေနိုင်သည်။ မည်သည့်လမ်းကြောင်းများကမည်သည့်လမ်းကြောင်းကိုအများဆုံးမောင်းနှင်သည်နှင့်အနည်းဆုံးအနိမ့်ဆုံးသို့ရောက်သည်ကိုကြည့်ရန် Acquisition> Overview အစီရင်ခံစာသို့သွားရောက်ပါ။ ပရိသတ်အပိုင်းကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်သင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေနိုင်သည် အသုံးပြုသူများအားလုံး သို့ ပွောငျး။ အကယ်၍ သင့်တွင်ရည်မှန်းချက်တစ်ခု (သို့) ရည်မှန်းချက်အုပ်စုတစ်ခုထက်ပိုပြီးတည်ဆောက်ပါက၊ ရုပ်သံလိုင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိကျသောရည်မှန်းချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ထပ်မံဖြိုခွဲနိုင်သည်။
အထက်ပါအချက်အလက်အားလုံးသည်ပြိုကွဲပြီးဖွဲ့စည်းပုံသို့အလွှာများဖြင့်သင်ယခုပြောင်းလဲနိုင်သည့်ပရိသတ်အမျိုးအစား၊ ပြောင်းလဲခြင်းသို့ ဦး တည်နှင့်ပြီးနောက်သူတို့၏လမ်းကြောင်းများ၊ သူတို့ပြုလုပ်သည့်မတိုင်မီ၊ သူတို့လုပ်စဉ်နှင့်ပြီးနောက်သူတို့မည်သို့ပြုမူသည်ကိုသင်မြင်တွေ့နိုင်သည်။ ဝယ်ယူမှု။
သင်၏အကောင်းဆုံးစံနမူနာရှင်ဖောက်သည်၏စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ကိုယ်စားပြုမှုအဖြစ်ဖောက်သည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာစျေးကွက်တင်ရန်နှင့်သူတို့၏ရောင်းသူ / ပံ့ပိုးသူအဖြစ်သင့်အားရွေးချယ်ရန်သူတို့ကိုအဘယ်အရာကလှုံ့ဆော်ပေးမည်ကိုကူညီလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုဥပမာအားဖော်ပြကြပါစို့။ သင်သည် cookbook များကိုရောင်းနေသည်ဟုဆိုပါကသင်၏ရည်မှန်းချက်မှာအရောင်းအရေအတွက်တိုးမြှင့်ရန်နှင့်လာမည့် Thanksgiving အတွက်သုံးစွဲသူအသစ်တစ်ခုအတွက်ရှိပြီးစီးရီးအသစ်များကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီဟာတွေထဲကဘယ်တစ်ခုကမင်းစျေးကွက်အတွက်လွယ်ကူသလဲ။
“ Instagram နှင့် Pinterest တို့မှဒီ Thanksgiving အတွက်ဒီချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်စီးရီးကိုကျွန်ုပ်တို့မြှင့်တင်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအသက် ၂၄-၅၅ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတွေ၊ ချက်ပြုတ်ရတာကိုနှစ်သက်ပြီးဒီနှစ်ချက်ပြုတ်နည်းစာအုပ်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်။ ”
“ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်က [ဒီ] ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်စီးရီးကိုမာသသို့မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ သူမသည်အသက် ၄၀ နှစ်အရွယ်ရှိအိမ်မှာအမေနေထိုင်ပြီးချက်ပြုတ်ရတာကိုနှစ်သက်သည်။ သူမချစ်တယ် #foodporn စာမျက်နှာများနှင့် Instagram ကိုအပေါ်သူမ၏ဟင်းလျာများဝေမျှပေးသည်။ သူမသည်ရှေးရိုးစွဲရိုးရာအစဉ်အလာစံနှုန်းများကိုနှစ်သက်သည်။ ထို့ကြောင့်အားလပ်ရက်ကြီးများသည်သူမအတွက်ကြီးမားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူမမိသားစုတစ်စုလုံးနှင့်သူငယ်ချင်းများအတွက်ချက်ပြုတ်နိုင်သည့်နှစ်၏တစ်ခုတည်းသောအချိန်ဖြစ်သည်။ Martha သည်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်ဝယ်ယူထားပြီးအနည်းဆုံးတစ်လလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Instagram feed နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသိုင်းအဝိုင်းမှထုတ်လုပ်သည့်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည်။ သူကချက်ချင်းထမင်းဟင်းချက်ပြီးအော်ဂဲနစ်အစားအစာတွေစားတယ်။
ခြားနားချက်ကိုတွေ့လား။ ဖောက်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုယ်စားပြုမှု၏ဤကြင်နာသင်ဖွဲ့စည်းပုံသို့အလွှာအထက် - ပေးထားသောမက်ထရစ်ကနေရနိုင်သည်အရာဖြစ်တယ်။
ဤဖောက်သည်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်ရန်ခက်ခဲပြီးရှုပ်ထွေးမှုအဆင့်ကိုရောက်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင့်အတွက်စိန်ခေါ်မှုများလွန်းလျှင်သင်ကျိန်းသေသင့်သည် အဆင့်မြင့်ပရိသတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းတွင်အတွေ့အကြုံရှိသောဒစ်ဂျစ်တယ်အေဂျင်စီထံမှအကူအညီရယူပါ, segment နှင့်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး optimization ။
အသုံးအများဆုံး retention စျေးကွက်နည်းဗျူဟာနှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာ KPIs
ယခုတွင်သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုသိပြီးသူတို့၏အပြုအမူများကိုနားလည်လာသည်နှင့်အမျှသူတို့၏ထိန်းသိမ်းထားခြင်းအပေါ်သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများမှာပိုမိုရှင်းလင်းလာသည်။ Retention marketing နည်းသည်သင်၏နယ်ပယ်၊ စျေးကွက်၊ ဖောက်သည်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သို့သော် ၄ င်းတို့ကိုသတ်မှတ်ခြင်း၏အခြေခံဘောင်သည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
အချို့သော retention စျေးကွက်နည်းဗျူဟာများသည်အမြဲစိမ်းဖြစ်ပြီးမကြာခဏအတည်ပြုနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့ကယခင်ခြေလှမ်းမှာတည်ထောင်ထားတဲ့ဒေတာများကမောင်းနှင်နေကြသည်ယူဆချက်ပေးထား။
အဓိကအားဖြင့်ဝယ်ယူရေးနည်းဗျူဟာအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသော်လည်း SEO သည်ဖောက်သည်များ၏ထိန်းသိမ်းမှုကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်သစ္စာစောင့်သိမှုကိုတည်ဆောက်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာပေးထားသည်။
၄ င်းကိုအဓိကအားဖြင့်အကြောင်းအရာအရရော၊ သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးသော့ချက်စာလုံးများ၊ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ရည်ညွှန်းသည့်ရင်းမြစ်များကိုဖော်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အကြောင်းအရာများကို၎င်းတို့အာရုံစူးစိုက်ရန်နှင့်သိမ်းဆည်းရန်ပိုမိုနီးကပ်စွာလုပ်ဆောင်နေသည်။ ရှာဖွေရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ထရစ်များကိုသင်၏ SEO ထိန်းသိမ်းရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာတွင်မြှုပ်နှံပြီးအကြောင်းအရာလမ်းပြမြေပုံတစ်ခုဖန်တီးပါ။
တိုတောင်းသောအမြီးသော့ချက်စာလုံးများကိုသာအာရုံမစိုက်ပါနှင့်၊ သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုမြှင့်တင်ပါ။ သင်ဤအားဖြင့်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ် အသုံးပြုသူများ၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုပစ်မှတ်ထားသော LSI သော့ချက်စာလုံးများနှင့်သော့ချက်စာလုံးပုံစံကိုရှာဖွေခြင်း။ Martha နဲ့ချက်ပြုတ်စာအုပ်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကိုပြန်သွားကြစို့။ နောက်ဆုံးတွင်မာတာအားသင်ထံမှအခြားချက်ပြုတ်စာအုပ်ဝယ်ယူရန် ဦး ဆောင်စေနိုင်သည့်အကြောင်းအရာများသည်နှေးကွေးသောချက်ပြုတ်နည်းများ၊ စားစရာစားစရာများနှင့်၎င်းတို့ပြုလုပ်ရန်အိုးများ၊ ရာသီအလိုက်စီစစ်ထားသောပါဝင်ပစ္စည်းများရွေးချယ်မှုသို့မဟုတ်သူတို့ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူမသည်မိမိကိုယ်ကိုမိသားစု၏ကျောရိုးတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးညစာစားပွဲကိုစုဆောင်းခြင်း၊ ရပ်ရွာနှင့်မိသားစုတန်ဖိုးများအဖြစ်ရှုမြင်ပါကမာသာသည်ချက်ပြုတ်စာအုပ်ဝယ်ယူခြင်းသို့ ဦး တည်သွားနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူကိုကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အတင်းအကျပ်ပြုခိုင်းရုံမကသူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားပါ။
ခိုင်မာတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ခိုင်လုံသော HTML5 နှင့်သတင်းအချက်အလက်ဗိသုကာကဲ့သို့သော site ကို optimization ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အထူးသဖြင့် SEO ၏အချို့သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်များနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသော microdata markup crawlers က၎င်း၏နောက်ကွယ်မှဖွဲ့စည်းပုံနှင့် semantic နားလည်ရန်ကူညီပေးသည်။ ၎င်းသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပစ်မှတ်ထားသောအသုံးပြုသူ ဦး စားပေးချက်များအရရှာဖွေခြင်းရလဒ်စာမျက်နှာများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းနှစ်ခုစလုံးကိုကူညီပါ ဥပမာအားဖြင့်၊ တည်ဆောက်ပုံနှင့် semantic website markup သည်ကွဲပြားသောရလဒ်များကိုဤကဲ့သို့သောလူများအားကွဲပြားစွာပြသရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ငါရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှတဆင့်ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်ရှာဖွေတဲ့အခါ, ငါအများဆုံးဖွယ်ရှိပြန်လာရလဒ်အဖြစ်မင်းမဲ့စရိုက် cookbook ရလိမ့်မယ်။
၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အသုံး ၀ င်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားနည်းပညာဆိုင်ရာရှုထောင့်များဖြစ်သောစာမျက်နှာ ၀ င်ချိန်၊ တုန့်ပြန်မှုနှင့်ရရှိနိုင်မှုတို့သည်အသုံးပြုသူများကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်သစ္စာရှိမှုကိုတည်ဆောက်ရန်အထောက်အကူပြုသည့်အရေးကြီးသော SEO အချက်များဖြစ်သည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုကြည့်။ မရပါ (သို့) တင်ရန်ခက်ခဲလျှင်အသုံးပြုသူများသည်၎င်းနှင့်ထိတွေ့မှုမရှိသလောက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာ သော့ချက်စာလုံးများ၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်အစုများအတွက် (SERP) အနေအထား
စာမျက်နှာအမြင်များ session တစ်ခုနှုန်း
ကျိန်းဝပ် အချိန် (စာမျက်နှာပေါ်တွင်ပျမ်းမျှအချိန်)
လူမှုမီဒီယာသည်အသိပညာ၊ ယုံကြည်မှုနှင့်သစ္စာရှိမှုကိုတည်ဆောက်ရန်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် SEO / SEM ထိန်းသိမ်းမှုနည်းဗျူဟာများနှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်အရန်သင့်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောရည်ညွှန်းချက်များကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေရန်အမှတ်တံဆိပ်ထောက်ခံသူများကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်သင်၏တံခါးဖြစ်သည်။
SEO အားထိန်းသိမ်းရန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်သင်၏တည်ထောင်ထားသောအယ်ဒီတာ့အာဘော် / ထုတ်ဝြေခင်းပြက္ခဒိန်နှင့်တွဲဖက်ပြီးအမှတ်တံဆိပ်ရှိသည့် hashtags နှင့် link tracking နှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်ဖောက်သည်များ၏သစ္စာရှိမှုကိုတည်ဆောက်ရန်အားကောင်းသောလမ်းကြောင်းဖြစ်လာသည်။
ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက်အခွင့်အလမ်းအသစ်များကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ရှာဖွေရန်အလားအလာရှိသည့်အမှတ်တံဆိပ်ထောက်ခံသူများ၏အရင်းအမြစ်ကိုအမှတ်အသားပြုရန်အတွက်အမှတ်တံဆိပ် hashtags နှင့် link ကိုခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏အကြီးမားဆုံးသောအကျိုးကျေးဇူးမှာသင်၏အလားအလာရှိသောရှိပြီးသားဖောက်သည်များနှင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီထိတွေ့ဆက်ဆံရန်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ chatbots များကိုအသုံးချခြင်းနှင့်သင်၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုရန်သင်၏အရောင်း ၀ န်ထမ်းများအားပညာပေးခြင်း ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များ၏သစ္စာရှိမှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်အံ့ဖွယ်အမှုများပြုလုပ်သောတစ်ခုတည်းသောသတိမမူမိသည့်နည်းဗျူဟာဖြစ်သည်.
အရေအတွက် နောက်လိုက် နှင့်ပရိတ်သတ်များ
စေ့စပ်ထားခြင်း နှုန်း - မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့်စာမျက်နှာတိကျတဲ့နှစ် ဦး စလုံး
ရာခိုင်နှုန်း လွှဲပြောင်းအသွားအလာ လူမှုမီဒီယာလိုင်းများမှတဆင့်ထုတ်ပေး
အဆိုပါ အကြောင်းအရာ၏အသံအတိုးအကျယ် စျေးကွက်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်မှတဆင့်တွန်း
အရေအတွက် ပြီးစီးခဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုတောင်းဆိုမှုများ လူမှုမီဒီယာချက်တင်၊ မှတ်ချက်များနှင့်စာတိုပေးပို့ချက်များမှတစ်ဆင့်
ဒီအီးမေးလ်ဟာဘယ်တော့မှသေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး၊ အဲဒါက ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အသုံးပြုမှုအားလုံးရဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုအများအားဖြင့်အသုံးပြုသူထိန်းသိမ်းခြင်း၏အဓိကမောင်းနှင်အားအဖြစ်အသုံးပြုသည် သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း အအေးခဲ။ ဖောက်သည်များ၏ထိန်းသိမ်းမှုကိုတိုးတက်စေရန်အီးမေးလ်စျေးကွက်မှတစ်ဆင့်အသုံးပြုသောအသုံးအများဆုံးနည်းဗျူဟာနှစ်ခုမှာနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများနှင့်အကြောင်းအရာဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်အတူသတင်းလွှာများပေးပို့ခြင်းနှင့်ရှိပြီးသားဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းသို့အထူးလျှော့စျေးနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ထပ်ခါတလဲလဲဝယ်ယူမှုများကိုဆွဲဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။
ပွင့်လင်းမှုနှုန်းနှင့် CTR အရအကောင်းဆုံးရလာဒ်များကိုဤနည်းဗျူဟာများမှအကြောင်းအရာ curation ကိုသင်၏အယ်ဒီတာပြက္ခဒိန်နှင့်ထပ်တူပြုနိုင်သည်။ သုံးစွဲသူ၏ ဦး စားပေးမှု၊ ရာသီအလိုက်လမ်းကြောင်းနှင့်လူ ဦး ရေအခြေအနေအရအီးမေးလ်စာရင်းကိုခွဲခြားရန်သင်၏အားထုတ်မှုများကိုထပ်မံဖြိုခွဲနိုင်သည်။
ဒါပေမဲ့ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုပိုမိုသတိကြီးစွာဖြင့်ချဉ်းကပ်သင့်သည် အဆိုပါဖျောပွမဆိုထက်။ အလွန်အကံျွမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်မှုညံ့ဖျင်းခြင်းကသင်၏ဒိုမိန်းတစ်ခုလုံးကိုနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းစေပြီးယခုအထိတည်ဆောက်ထားသည့်ယုံကြည်မှုကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ဤနေရာတွင်မှတ်သားရန်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာသင်၏အသုံးပြုသူသည်သင်၏စာပို့စာရင်းတွင်သူရောက်ရှိနေကြောင်း၊ သင်မည်သို့ကိုင်တွယ်မည်၊ သူ / သူမနှစ်သက်ရာကိုချိန်ညှိရန်သို့မဟုတ်အချိန်မရွေးဖျက်သိမ်းရန်အခွင့်အလမ်းပေးထားသည်ကိုသတိပြုရန်ဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စာပို့ server သို့မဟုတ်တတိယပါတီဝန်ဆောင်မှုအတွက်အသုံးပြုမလားဆိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်သောအခါအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောစည်းမျဉ်းများအားလုံးကိုလိုက်နာနိုင်ပြီး၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာ။ ခြေရာခံနိုင်စွမ်းရှိမရှိစဉ်းစားပါ။
အရေအတွက် အီးမေးလ်များပို့ပြီး out - မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတိကျတဲ့၊
နှုန်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ အီးမေးလ်၏ (CTR)
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်သင်၏ဖောက်သည်များ၏သစ္စာရှိမှုကိုအမှန်တကယ်တိုးတက်စေရန်သင့်ဖောက်သည်များကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ retention marketing အားထုတ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်ရန်ဖောက်သည်အားဆန်းစစ်ရန်မူဘောင်များစွာရှိသည်။ ဖောက်သည်တစ် ဦး အားထိန်းသိမ်းထားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကိုတီထွင်ခြင်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။
သင်၏ဖောက်သည်ခရီးစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏နက်ရှိုင်းသောတိုင်းတာမှုနှင့်တိုးမြှင့်မှုဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတို့သည်ကောင်းမွန်သောအစဖြစ်သော်လည်းသင့်အားမဖွဲ့စည်းထားသောဒေတာများစွာပေးလိမ့်မည်။ အရောင်းသံသရာပြီးဆုံးပြီးနောက် ကျော်လွန်၍ သူတို့၏အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောမေးခွန်းများအားမေးမြန်းရန်နှင့်အဖြေပေးရန်ဤအချက်အလက်များကိုသင်အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းသည်သင်၏ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရာ၌သင်၏အောင်မြင်မှုကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
ထိုအ retention ကနေသစ္စာရှိမှုနှင့်ယုံကြည်မှုမြင့်တက်။
Tags: ဝယ်ယူလိုင်းများတုံမှုနှုန်းကလစ် - မှတဆင့်မှုနှုန်းနှုန်းကိုကလစ်နှိပ်ပါဖောက်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ဧည့်ဝန်ဆောင်မှုဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုတောင်းဆိုမှုကိုဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအချိန်နေပါအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ထရစ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှုန်းပရိတ်သတ်တွေနောက်လိုက်analytics googleဘက်ကလင့်များkey ကို performance ကိုညွှန်ကိန်းများkpiစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ထရစ်ပွင့်လင်းမှုနှုန်းအော်ဂဲနစ်အသွားအလာအပြင်ထွက်လင့်များစာမျက်နှာအမြင်များsession တစ်ခုအတွက်စာမျက်နှာအမြင်များPersonaလွှဲပြောင်းအသွားအလာဝယ်ယူနှုန်းကိုပြန်လုပ်ပါretention channel များထိန်းသိမ်းခြင်းမက်ထရစ်အရောင်းမက်ထရစ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ထရစ်ကိုရှာပါserpလူမှုမီဒီယာမက်ထရစ်
10 အနိုင်ရ Gamification မဟာဗျူဟာအဘို့အသိကောင်းစရာများ
EverySocial: သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအား Social Amplifier အဖြစ်ပြောင်းပါ